Cunto: Isticmaalida Python si aad u xayeysiiso shabakadaha
Webka xoqitaanka ayaa sidoo kale lagu qeexay sida fiirinta macluumaadka webka waa hab lagu helo macluumaadka shabakadda iyo soo dhoofinta xogta qaabab loo adeegsan karo. Xaaladaha intooda badan, farsamadan waxaa isticmaala webmasters si ay u soo saaraan qaddar fara badan oo xog ah oo qiimo leh oo laga helo bogaga internetka, halkaas oo xogta la xoqay loo kaydiyey Microsoft Excel ama faylka deegaanka.
Sida loo xoqo Website-ga Python
Bilawga cusub, Python waa mid ka mid ah luuqadaha barnaamijka caadiga ah ee la isticmaalo kuwaas oo aad u xoojinaya akhrinta koodhka. Waqtigaan, Python waxay u ordeysaa Python 2 iyo Python 3. Luqada barnaamijyadani waxay ka kooban tahay maaraynta xusuusta iyo habka firfircoonida ah. Hadda, luuqadda barnaamijka Python ayaa sidoo kale ku jira horumarinta bulshada - real subscribers for youtube.
Waa maxay sababta Python?
Ka helitaanka xogta laga helo bogag internetka ah oo u baahan in lagu galo ayaa ah caqabad muhiim u ah dad badan oo websaydh. Tababarkan xajinta ah, waxaad baran doontaa sida loo xoqo goobta ee u baahan oggolaansho gaaban adigoo isticmaalaya Python. Halkan waa tusahan talaabo tallaabo tallaabo ah oo awood u siin doona inaad dhammaystirtid geeddi-socodkii burburinta si hufan.
Tallaabada 1aad: Waxbarashada Target-Website
Si loo soo saaro xogta laga helo bogagga internetka ee loo baahan yahay oggolaanshaha login, waxaad u baahan tahay inaad abaabusho faahfaahinta loo baahan yahay.
Si aad u bilawdid, ku dhufo "Username" oo aad dooratid "Xulashada Kontoroolka". "Magaca magaca" waa furaha.
Right click riix icon "Password" iyo dooro "Kormeer item".
Raadi "authentication_token" hoosta bogga. U ogolow tagitaankaaga qarsoon qarsoodi inuu yahay qiimahaaga. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la ogaado in boggaga internetka ay isticmaalaan qoraallo qarsoon oo qarsoon.
Website-yada qaarkood waxay isticmaalaan foomka gaaban ee furaha ah halka qaar kalena ay qaataan qaababka adag. Haddii aad ka shaqeyneyso goobaha durugsan ee isticmaala qaababka adag, fiiri browser-kaaga codsiga qoraalka iyo calaamadee qiyamka muhiimka ah iyo furaha loo isticmaali doono si loo galo bogga.
Tallaabada 2aad: Kuqor Gelitaanka Goobtaada
Talaabadan, sameyso shay xisaabeed oo kuu ogolaanaya inaad ku qaadato fadhiga login si aad u hesho dhammaan codsiyadaada. Waxa labaad ee in la tixgeliyo waxaa soo saarida ah "calaamo csrf" ka page target-web. Calaamadda ayaa kaa caawin doonta inta lagu jiro galitaanka. Xaaladdan, isticmaal XPath iyo lxml si aad u soo qaadato calaamadda. Sameyso marxalad login si aad u dirto codsi si aad u soo galo cinwaanka login.
Tallaabada 3aad: Xogta Dhageysiga
Hadda waxaad ka saari kartaa xogta goobta aad beegsaneyso. Isticmaal XPath si aad u ogaato shaygaaga bartilmaameedkaaga oo soo saar natiijooyinka. Si aad u ansixiso natiijooyinkaaga, waxaad eegtaa foomka code-ka-code ee koodhka codsiyada kasta. Si kastaba ha noqotee, xaqiijinta natiijooyinka ma kuu sheegi doonaan in marxaladda ku-meel-gaadhka ay ku guulaysatay laakiin waxay u muuqataa inay tahay tilmaame.
Khabiirada xoqista, waxaa muhiim ah in la ogaado in qiimaha soo noqoshada qiimaynta XPath ay kala duwan tahay. Natiijooyinku waxay ku xiran yihiin macnaha erayga "XPath by user-ka dhamaadka. Aqoonta isticmaalka sheekooyinka rasmiga ah ee XPath iyo soo saarista sheekooyinka XPath ayaa kaa caawin doona inaad ka soo saarto xogta goobaha u baahan oggolaanshaha login.
Iyadoo Python, uma baahnid qorshe dib-u-hagaajin ah ama walwal ah oo ku saabsan burbur-diiqad adag. Python waxay si wax ku ool ah u soo saartaa xogta laga helo goobaha static iyo firfircoonida oo u baahan oggolaansho gaaban si ay u helaan marmarka. Qaado webkaaga waayo-aragnimada heerarka soo socota adoo ku rakibaya version Python oo ku saabsan kombiyuutarkaaga.